गर्मी बढेपछि ‘गर्मी भयो धरान’ सार्वजनिक (भिडिओ)::Hamro Koshi Awaj / awaz
शनिबार, जेठ १, २०७८
गर्मी बढेपछि ‘गर्मी भयो धरान’ सार्वजनिक (भिडिओ)
हाम्रो कोशी आवाज
२०७८ वैशाख १२
धरानः अमर वान्तुको नयाँ गीत ‘गर्मी भयो धरान’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
गीतमा सत्यराज आचार्य र मेलिना राईको आवाज रहेको छ । भिडियोमा दिनेश बान्तवाको संगीत रहेको छ । भूमिषा प्रोडक्सनले निर्माण गरेको भिडियोलाई जनकदीप पराजुलीले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा पल शाह, साहारा राई र सशी राई लोहोरुङ फिचर्ड छन् ।
भिडियो धरान, भेडेटार आसपासमा छायांकन गरिएको छ । सागर प्रधानले छायांकन गरेको भिडियोको सम्पादन धुव्रराज पराजुली ‘प्रज्वलित’ ले गरेका हुन् । सार्वजनिक भिडियोमा मनिता राईको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
कवि तथा गीतकार अमर वान्तुका दर्जनौं गीतहरु बजारमा सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले लेखेका गीतहरु सिल्की कपाल, हृदयको आवाज, फूलजस्तै, तिम्रो शहर, हरहर महादेव, जीवनको दौडमा लगायतका गीतहरु बजारमा उपलब्ध छन् । उनको अमर भावना भाग १ र २ गीतिसंग्रह पनि बजारमा आइसकेको छ । कविता लेखनमा पनि अब्बल श्रेणीमा स्थापित गरिसकेका गीतकार तथा कवित अमर पछिल्लो समयमा गीत लेखनमा सक्रिय रहेका छन् ।
नायक शाह म्युजिक भिडियोको सुटिङ गर्न धरान आएका बेला विवाद समेत सिर्जना भएको थियो । अभिनेता पल र चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधानबीच यस विषयमा सहमति भएसँगै विवाद पनि टुंगिएको थियो । तर जे होस् गीतले धरान, भेडेटार चिनाउने काम पनि गरेको छ ।
धराने हामी कति सचेत ?
फेरि चकमन्न धरान
पत्रकारका समस्या लिएर धरान उपमहानगरपालिका पुग्यो टोली
धरानमा अधिकांश दाहसंस्कारस्थल मानव वस्तीनजिकै
भोलिदेखि धरानेले तरकारी खानै नपाउने ?
नयाँ सरकार गठनसँगै सबै निकाय कोभिडविरुद्ध सक्रिय
अरुण तेस्रोमा ढुंगाले लागेर मजदुरको मृत्युः ३० लाख रुपैयाँ दिने सहमतिपछि शव जिम्मा, अरुण तेस्रोको काम ठप्प
छुरा प्रहारबाट मानबहादुर राईको मृत्यु, सुशील दर्जी र दिलबहादुर लिम्बू समातिए
७५% हाम्रा विचार नकारात्मक
धरानमा हत्यामा संलग्न सार्वजनिक
धरानमा २२ लाखमा पार्कसहितको जीम सञ्चालनमा आउने, धराने सबैले जीम गर्न पाउने
धरानका संक्रमित होम आइसोलेसनमै
धरानको घण्टाघर छेऊको सडक ४० वर्षसम्म टिक्ने बनाइने
अक्सिजन घटे यो औषधि लिऔं